Ciidamada Yugaandha Oo Lagu Weeraray Koonfurta Soomaaliya. – Somalimirror.net
Warar dheeraad ah waxay kasoo baxayaan weerar jid-gal ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan shisheeyaha gaar ahaan kuwa Yugaandha iyo ciidamada dowladda lagula eegtay deegaanno ka tirsan wilaayada Sh/hoose ee dhacda koonfurta dalka Soomaaliya.
Weerarka ugu horreeya oo ahaa kammiin ay diyaariyeen ciidamada shabaabul Mujaahidiin waxa uu qabsaday kolonyo ciidamo saliibiyiin ah oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaannada N/60 iyo Shalaanbood oo ka wada tirsan wilaayada Sh/hoose.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in weerarka dhabbagalka ah ay kusoo dhaceen ciidamada dowladda saliibiyadda ah ee Yugaandha, waxaana halkaas ka dhashay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray ciidamada kuffaarta Afrikaanta.
Dhanka kale waxay ciidamada shabaabul Mujaahidiin weerar kale oo dhabbogal ah u dhigeen kolonyo ciidamo murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka Bariire ee hoos taga degmada Afgooye ee wilaayada shabeellada hoose.
Xogaha soo baxaya may xaqiijin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka balse waxaa la aamin sanyahay in weerarka uu gaystay khasaare kala duwan oo ciidamada dowaldda soo gaaray.
Ciidamada shabaabul Mujaahidiin waxay maalmihii dambe sii kordhiyeen weerarradooda ka dhanka ah ciidamada kuffaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaadka Soomaalida kuwaas oo si xowli ah uga socda deegaannada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayada Shabeellada hoose.
Previous PostSarkaal katirsanaa Sirdoonka dowladda oo Howlwadaag lagu dilay.
Next PostMareykanka oo 12 qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday magaalada Kaabuul.